xalin Happy Bunny
Year 1 4 todobaad ka hor #1118 by Old John
Maadaama magacaygu isticmaalayo inaan ka sarreeyo 60. Qibradeyda dhabta ah ee dunidu waxay ahayd waqti dheer kahor Chipmunk iyo Vickers Varsity. Waxaan billaabay duulimaad la yiraahdo dhowr sano ka hor 16 iyadoo la adeegsanayo FS hal mitir oo duulimaad iyo pc oo ka socda adduunka PC. Sannado badan ayaan maalgashi ku qaatay qalabka software-ka iyo qalabka, weligeedba waxaan u shaqeynayaa xaqiiqda. Hadda waxaan haystaa dusha sare ee kombiyuutarka dhexdhexaad ah laga bilaabo Chillblast. Oculus VR iyo goobaha orbx. My pc waxaa la soo iibsaday July 2017 waxaana la yimid Windows 10. Markaa waxaan ku dhejin doonaa FSX Steam. Dhamaan kuwan waxay ahaayeen kuwo raadinaya diyaarad gaar ah oo duulaya. Douglas DC3. Diyaaradaha duulimaadka kaliya ayaa ah mid aad u fiican, maadaama aan ku noolahay Licolnshire oo aan ka fogayn RAF Coningsby iyo Battle of British Memorial Flight iyo Dakota ZA947. Sidoo kale waxaan ahay booqdaha joogtada ah ee Duxford labadaba ee dunida dhabta ah iyo dunida siman. Waxaa jira freeware quruxsan leh oo leh ikhtiyaarka hawada-bandhigga ah si aan u duuli karo garabka 'Sally B'. Dhammaanteen way ku fiican yihiin adduunkayga, laakiin halkan waa soo noqnoqonaysaa. Steam FSX waxay go'aansatay inayan si fiican u ciyaari doonin Windows 10. Sidaas awgeed waa inaan qaniinaa rasaasta una beddelaa P3D V4. Halkaan waxaad ka imaaneysaa hoos u dhigista Legends of Flight DC3 kuma dhici doonto P3D. Sidoo kale Duxford free freeware. Si aad u hesho C47-gaaga waa ilaahyo quman. Waa mid qumman, waa inaan ogaadaa sidii aan ku dul socday Dakota dhabta ah. OK ma jirto wax uraya. Laakiin sida ugu dhow ee xaqiiqada ah sida sim ayaa heli kartaa. Anigoo dhaleeceynaya oo keliya, maya maya, waa codka ama maqnaanshaha baaskiilada iyo bamgaradka shidaalka iyo wacitaanada. Waxaan u duulayaa laaluushka iyo waxaan jeclaan lahaa midabada RAF. Sannadka soo socda ee adduunka dhabta ah waxaa jiri doona Dax jimicsiga Normandy oo ka foojigneynaya qoryaha daroogada ee ku yaala boggaga degaanka Normandy. Aniga dabcan waan ku duulayaa. Waxaan sidoo kale rajeynayaa inaan u safaro Dakota. Laakiin mar kale ayaan kuugu mahad celinayaa Dakota cajiib ah oo aan ku farxi lahaa.
Year 1 4 todobaad ka hor #1119 by rikoooo
Waad ku mahadsantahay hanaankaaga wanaagsan. Waxaan ku faraxsanahay inaad ku duuli kartid C47 adoo aan wax dhibaato ah. Ku soo dhowow golaha.